Razer Blade 15 Advanced RZ09-03137E02-R341 Black (i7-9th Gen) ~ ICT.com.mm
HomeRazer Blade 15 Advanced RZ09-03137E02-R341 Black (i7-9th Gen)
Razer Blade 15 Advanced RZ09-03137E02-R341 Black (i7-9th Gen)
15.6″ Full HD, 1920 x 1080 9th Gen Intel® Core™ i7-9750H processor,6Cores / 12 Threads, 2.6GHz / 4.5GHz (Base / Max Turbo), 12MB Cache Mobile Intel® HM370 Chipset Intel® UHD... [Learn more]
Brand: RazerSKU: 151525N/ASee more: Computer Systems, Gaming, Laptops / Notebooks, New Arrivals, Products, Razer, ShopFilter by: 15.6", 16GB RAM, 512GB SSD, Black, EDIT-ONE, Gaming Laptops, Intel Core i7-9th Gen, NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6GB, USD, Windows 10 Home
15.6″ Full HD, 1920 x 1080
NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 with Max-Q Design (8GB GDDR6 VRAM, Optimus™ Technology)
512GB SSD (M.2 NVMe PCIe 3.0 x4), xpandable up to 2TB SSD (M.2 2280)
Power Adapter: 230W power adapter
Approx. Size: 0.70″ / 17.8mm x 9.25″ / 235mm x 13.98″ / 355mm
Approx. Weight: 4.74 lbs / 2.15 kg
ဒီ Razer Blade 15 က Gaming Desktop တစ်လုံးရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို Laptop မှာအသုံးပြုနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ Flagship အဆင့် Gaming Laptop တစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။မျက်နှာပြင်ကို ပုံမှန် 15.6” အရွယ်အစားနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး Full HD resolution ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Screen Refresh Rate မြင့်မားတဲ့အတွက် မြန်ဆန်တဲ့ Gaming Scenes တွေကိုရုပ်ထွက် ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့ ကစားနိုင်မှာပါ။ CPU အတွက် Intel ရဲ့ အမိုက်စား6core (i7-9750H) Processor ကို တပ်ဆင်ပေးထားပြီး RAM 16GB (DDR4, 2666MHz) နဲ့တွဲဖက်ပေးထားတာကြောင့် တကယ့်အမိုက်စား PC Games တွေအားလုံးကို ကစားနိုင်မဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ RAM Slot နှစ်ခု ပါဝင်တာကြောင့် RAM အရမ်းအမြင့်ကြီးလိုအပ်တဲ့ Game တွေကို ကစားချင်ရင်လည်း RAM ထပ်မြှင့်ပြီး ကစားနိုင်ပါတယ်။ Gaming Laptop ရဲ့အသက်ဖြစ်တဲ့ ဂရပ်ဖစ်ပိုင်းအတွက် Intel® UHD Graphics 630 နဲ့ NVIDIA® ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် GeForce RTX™ 2080 with Max-Q Design (8GB GDDR6 VRAM) တို့ကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်။ GeForce RTX™ 2080 ဂရပ်ဖစ်ကတ်က NVIDIA ရဲ့ AI နည်းပညာပါဝင်တဲ့ဂရပ်ဖစ်ကတ်ဖြစ်ပြီး သဘာဝကျတဲ့အလင်းအမှောင်အနေအထား၊အခြားဂရပ်ဖစ်ကတ်မျိုးဆက်တွေထက် (၆)ဆအထိ မြန်ဆန်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့တကယ့်အမိုက်စား ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးရရှိတဲ့ နည်းပညာမြင့် ဂရပ်ဖစ်ကတ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဒေတာသိမ်းဆည်းဖို့အတွက် SSD 512GB ကို တပ်ဆင်ပေးထားတာကြောင့် ဒေတာ Read/Write Speed က HDD အသုံးပြု Gaming Laptop တွေထက်အဆပေါင်းများစွာ မြန်ဆန်မှာဖြစ်ပြီး Windows နဲ့ Gaming Softwares တွေရဲ့ Booting Time က စက္ကန့်ပိုင်းပဲ ကြာမြင့်တာကို တွေ့ရမှာပါ။ SSD 2TB အထိ တိုးမြှင့်လို့ရတဲ့အတွက် ဂိမ်းတွေ အများကြီးသွင်းထားချင်လို့ Storage မြှင့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ ကီးဘုတ်မှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ကီးတွေက Razer Chroma™ ရဲ့ N-Key rollover ကီးဘုတ်နည်းပညာကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက်ကီးအတွဲလိုက်နှိပ်တဲ့အခါမှာ ကီးမငြိဘဲ မိမိပေးလိုက်တဲ့ Command တိုင်းကို အတိအကျဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကီးဘုတ်ရဲ့ Lightning က Per Key RGB ဖြစ်တဲ့အတွက်ကီးတစ်ခုချင်းကို မိမိစိတ်ကြိုက် မီးရောင်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ Laptop Accessories တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက် USB-A Ports တွေအပြင် USB-C (Thunderbolt™ 3) Port ကိုလည်းထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ပြင်ပ External Display မော်နီတာတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ HDMI Output အပြင် Mini DisplayPort 1.4 Output လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ OS အဖြစ် Windows 10 Home နဲ့ အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပြီး 80Whr ဘတ္ထရီကို တပ်ဆင်ထားတဲ့အတွက် ဘတ္ထရီပါဝါလည်းအတော်လေးကောင်းမွန်တဲ့ Gaming Laptop တစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဘေးဘောင်ပါးလွှာတဲ့မျက်နှာပြင်ကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်းကို ရိုးရှင်းတဲ့ အနက်ရောင်ကာလာနဲ့ ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။အာမခံတစ်နှစ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Razer Blad 15